के हो महिनावारी कप भनेको ? महिलाहरुको रोजाईमा कसरी पर्दैछ ? एक पटक किनेपछि १२ बर्षलाई ढुक्क | स्वास्थ्य जीवनशैली
June 10, 2021 NepstokLeaveaComment on के हो महिनावारी कप भनेको ? महिलाहरुको रोजाईमा कसरी पर्दैछ ? एक पटक किनेपछि १२ बर्षलाई ढुक्क
बास्तु शास्त्रका अनुसार्, ‘बाथरुममा एक कचौरा नून राख्नुस,चम्किनेछ तपाईहरुको भाग्य’ जानकारी सेयर पनि गर्नेकी ?